33% dadka Maraykanka ah ee aan la tallaalin ayaa sheegaya in aysan waligood qaadan doonin tallaal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » 33% dadka Maraykanka ah ee aan la tallaalin ayaa sheegaya in aysan waligood qaadan doonin tallaal
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dadka ku nool Boqortooyada Midowday (UK) waxay laba jibbaar u badan tahay in la tallaalo sida dadka Maraykanka.
Dadka Mareykanka laba jeer ayay u badan tahay inaysan helin hal jab oo dhiggooda UK.
39% dadka Mareykanka ah lama tallaali doono sababtoo ah 'ma aaminaan dowladda'.
Dowladda Mareykanka waxaa horyaalla safar dhab ah oo lagu qancinayo dadka Mareykanka inay is tallaalaan.
Xogta iyo natiijooyinkii ka soo baxay sahankii ugu dambeeyay ee hagar -daamaynta tallaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa maanta la siidaayay, taasoo muujineysa in dowladda Mareykanka ay waddo safar dhab ah oo ay ku qancinayso muwaaddiniinta muhiimadda tallaalka.
Sahanka waxaa la sameeyay laga bilaabo Ogosto 5, 2021 ilaa Ogosto 17, 2021 waxaana la weydiiyay qiyaastii 5,000 oo kaqeybgale oo Mareykanka ah iyo 1,000 kaqeybgale oo Boqortooyada Ingiriiska ah. Xogta waxaa la aruuriyay iyadoo la adeegsanayo hab cusub oo lagu bixiyo adeegsadayaasha taleefannada casriga ah sida “gig” shaqaalaha ka -qaybgalkooda waxayna keeneen jawaabo la taaban karo oo kumanaan ah ilaa maanta oo ay soo socdaan kuwo badan.
Natiijooyinku waxay muujiyeen kala -soocid muhiim u ah dadka aan la tallaalin ee Maraykanka iyo UK waxayna muujinayaan heerar kala duwan oo iska -caabbinta tallaalka ah. Sahanku wuxuu kaloo muujinayaa furitaanno suurtogal ah oo loo isticmaali karo in lagu qanciyo kuwa aan la tallaalin inay noqdaan kuwo la tallaalo.
Waa kuwan qaar ka mid ah natiijooyinka ugu habboon ee ka soo baxay sahanka:
Dadka Mareykanka ah waxay laba jeer u badnaayeen inaysan helin hal qiyaas tallaalka COVID-19 (45%) marka loo eego dhiggooda UK (23%).
33% dadka Maraykanka ah ee aan la tallaalin iyo 23% muwaadiniinta UK ee aan la tallaalin ayaa sheegay in aysan waligood qaadan doonin tallaal.
Kuwa hadda aan la tallaalin, 39% dadka Mareykanka ah iyo 33% ka -qaybgalayaasha UK ayaa sheegay inaysan qaadan doonin tallaalka sababtoo ah ma aaminsana dowladda.
Kuwa hadda aan la tallaalin, 46% ka -qaybgalayaashii UK waxay sheegeen inay is -tallaali doonaan haddii ay jiraan caddaymo badan oo tallaaladu shaqeeyaan marka la barbar dhigo 21% oo keliya dadka Maraykanka ah ee aan la tallaalin.
Kaliya 7% ka -qaybgalayaashii aan la tallaalin ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan qaadan tallaalka sababta oo ah uma malaynayaan in COVID uu yahay halis dhab ah, laakiin 33% ka -qaybgalayaasha UK ee aan la tallaalin ayaa taas ku tilmaamay inay sabab u yihiin.
Natiijooyinkaasi waxay muujinayaan in saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Mareykanka iyo UK ay la kulmaan caqabado u gaar ah sidii ay ugu qancin lahaayeen dadkooda aan la tallaalin si ay u helaan Covid-19 tallaal. Iyada oo 69% dadka UK ee aan la tallaalin ay diyaar u yihiin in la tallaalo marka ay helaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan baaritaanka, badbaadada, ama waxtarka (marka la barbardhigo kaliya 49% dadka Mareykanka ee aan la tallaalin), dariiqa loo maro siyaasad -dejiyeyaasha UK ayaa u muuqda mid toos ah. Dhanka kale, siyaasad -dejiyeyaasha Mareykanka, waa inay la dagaallamaan qaybo badan oo ka mid ah dadweynaha oo sheegay inaysan weligood tallaali doonin oo aysan sidaas yeeli doonin maxaa yeelay waxay aamminsan yihiin dowladda.